News - Downhole Drilling ọma jijiji Nguzogide na elu okpomọkụ Ileghara Ring Ring Solutions
Downhole Drilling ọma jijiji Nguzogide na elu okpomọkụ Ileghara Ring Solutions
Ngwaọrụ Downhole chọrọ mgbanaka mgbaaka iji nyefee ike na data ma kpochapụ eriri igwe na ịmị ọkụ na gburugburu ebe kachasị egwu. AOOD dị ka onye na-emepụta ihe na onye na-emepụta ihe mgbaaka eletrik, na-elekwasị anya mgbe niile na ihe kachasị ọhụrụ nke ngwaọrụ ndị na-egwu ala maka mgbapụta mgbaaka, ka e nyeworo nke ọma nnukwu arụmọrụ vibration, nnukwu okpomọkụ na mgbanaka mgbanaka mgbanaka na MWD (mmesho mgbe egwu. ) sistemụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị elu.
Imirikiti ihe mkpuchi AOOD ejiri na dowohole drings ngwaọrụ bụ nke a haziri ahazi, nke jupụtara na ya iji guzogide oke nkụja ọ bụla, ịma jijiji dị elu, ọnọdụ dị elu na gburugburu ebe obibi. Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ ruru 260 Celsius C na MTBF (Nke pụtara oge n'etiti ọdịda) ruo nde 60 nnupụisi. Dị mfe iji zukọta ma gbasasịa, enwere ike ijikọta ya na nnukwu okpomọkụ na nrụgide nrụgide dị elu na motọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ọ bụla gbasara mgbanaka mgbapụta na imewe mkpọpu ala gị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ sales@aoodtech.com.